Chelsea Oo Guuldaro Murugo Leh Stamford Kagala Kulantay West Ham United Iyo Blues Oo Markale Dhibco Lumisay. - Gool24.Net
Chelsea Oo Guuldaro Murugo Leh Stamford Kagala Kulantay West Ham United Iyo Blues Oo Markale Dhibco Lumisay.
Chelsea ayaa guuldaro xanuun badani Stamford Bridge kaga soo gaadhay kooxda West Ham United iyada oo Blues lix dhibcood ku lumisay labadii kulan ee ugu danbeeyay Premier League.
Gool ay West Ham United la timid bilawgii qaybtii labaad ayaa ugu filnaaday in ay saddexda dhibcood ku tirsadeen Stamford Bridge.
Chelsea ayaa Stamford Bridge ku soo dhawaysay kooxda ay London ka wada dhisan yihiin ee West Ham United laakiin Blues ayaa qaybtii hore ee kulankan ku fashilantay in ay jamaahiirta kooxdeeda siiso wixii ay ka filayeen.
Inkasta oo ay Chelsea qaybtii hore ahayd kooxda fursadaha ugu fiican heshay, haddana Frank Lampard ayaa daawanayay ciyaartoyda kooxdiisa oo awoodi kari waayay in ay wax goolal ah ku dhaliyaan Stamford Bridge.
Waxa kale oo Chelsea walwal ku abuurayay halista uu weerarka West Ham United abuurayay balse qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta waxay Chelsea ku fikiraysay in ay cadaadis badan saarto difaaca West Ham United si ay goolal u keensan karaan balse qorshaha ayaa Blues isku rogay.
Daqiiqadii 48 aad West Ham United ayaa neefta dib ugu celisay jamaahiirta Stamford Bridge ee goolka furitaanka kooxdooda ka sugayay waxaana Hammers goolka furitaanka u saxiixay Aaron Cresswell kaas oo dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay Pablo Fornals.
Ciyaarta ayaa noqotay 1-0 ay West Ham xaalada ugu sii xumaysay Chelsea oo markii horeba uu cadaadis ku saarnaa in ayna goolal la iman qaybtii hore ee ciyaarta.
Daqiiqadii 59 aad West Ham ayaa ugu dhawaatay in ay goolkeeda labaad keensato kadib markii uu Balbuena u muuqday in uu xaalada ku sii xumaynayo Blues laakiin goolhaye Kepa ayaa badbaadin fiican sameeyay.
Daqiiqadii 63 aad Frank Lampard ayaa markii uu yaabay laba isbadal shaxdiisa isbal ahaan ugu sameeyay wuxuuna ciyaarta soo galiyay Willian oo uu ku buuxiyay booska uu ka saaray Pedro halka Kante uu badalay Jorginho.
Daqiiqadii 68 aad West Ham ayaa u dabaal degtay wax u muuqday goolkooda labaad kaas oo uu dhaliyay Michail Antonio laakiin garsoore Jonathan Moss ayaa goolkan meesha ka saaray sababtoo ah in ay gacani jirtay waxayna Blues u ahayd naf ku soo noqosho oo kale!.
Daqiiqadii 71 aad Lampard ayaa badalkiisa saddexaad sameeyay wuxuuna ciyaarta ka saaray Olivier Giroud wuxuuna garoonka soo galiyay da’yarka Callum Hudson-Odoi.
Wax walba oo ay Chelsea samaysay waxay awoodi kari waayeen in ay goolka barbaraha keensadaan, waxayna ciyaartu ku dhamaatay 1-0 ay West Ham United guuldaradii labaad oo xidhiidh ah ku baday Blues oo hoos u sii quustay.